Madasha Badbaado Qaran oo waraaq furan u qortay beesha caalamka | KEYDMEDIA ONLINE
Madasha Badbaado Qaran oo waraaq furan u qortay beesha caalamka
Madasha Badbaado Qaran oo shalay looga dhawaaqay magaalada Muqdisho ayaa waxay caawa udireen waraaq furan Beesha Caalamka
MUQDISHO, Soomaaliya - Madasha Badbaado Qaran ayaa Beesha Caalamka u dirtay warqad furan, iyagoo ka hadlay sababaha loo aasaasay madasha iyo caqabadaha hor taagan doorashada dalka ee uu hor taagan yahay madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Maxamed Farmaajo.
Madashu waxay soo saareen oo ay diiradda ku saareen waraaqda furan ee ay caawa soo saareen qodobadan hoos ku qoran:
Madaxweynuhu wuxuu ku guul darreystay in uu dalka ku hoggaamiyo doorasho la isku af-garto oo xur iyo xalaal ah.
Wuxuu wiiqay dadaal kasta iyo ujeedo wanaagsan oo ay lahaayeen Saamileyda muhiimka ah ee Soomaliyeed. Shirkii Dhuusamareeb 4 wuu isaga soo baxay markii uu shirka socday laba maalin ayuu dantiisa ka dhex arkay inuu ka baxo
Madaxweynuhu isagoo waqtigiisu dhammaaday ayuu isugu yeerayaa madaxda dowlad goboleedyada, si ay uga shiraan arrimaha muhiimka ah ee doorashooyinka la xiriira.
Iyadoo Beesha caalamku ay isugu yeereen shir madaxda dowlad goboleedyada ayuu Farmaajo isna iclaamiyay shir 22 ka bishan ka dhaca magaalada Muqdisho.
Madaxweynuhu wuxuu wadaa qorshe uu doonayo in ammaanka garoonka diyaaradaha uu ku hoos geeyo ciidamo gaar ah oo ka amar qaata Saadaq John, kuwaasoo loogu yeero ciidamada Haramcad taasoo laga leeyahay ujeedo lagu carqaladeynayo ammaanka garoonka diyaaradaha oo ay daggan yihiin inta badan beesha caalamka.
Madasha oo uu guddoomiye u yahay guddoomiyaha golaha Aqalka Sare ee Baarlamanka JFS Mudane Senator Cabdi Xaashi ayaa qoraalkan u dirtay beesha Caalamka: